शेयरधनी कल्याणकारी अग्राधिकार फण्ड (SWPF)
कम्पनी समूहका शेयरधनीहरूलाई भविष्यको प्रतिफल सुनिश्चिताका लागि तयार गरेको स्किम “शेयरधनी अग्राधिकार शेयर फण्ड SWPF कम्पनीले नियमित रूपमा शेयरधनीहरू वृद्धि गर्दै जाने र कम्पनीलाई वृहत पुँजी संरचनासहित सशक्त पूर्वाधार बनाउन सक्ने तागत हासिल गर्ने रणनीति र भिजन बोकेको छ । पछाडि लगानी गर्ने शेयरधनीहरूलाई समेत सम्मानपूर्वक कम्पनीमा भित्र्याउने र भैरहेका शेयरधनीलाई समेत लगानीको न्याय दिन सक्ने गरी “शेयरधनी अग्राधिकार शेयर फण्ड” को स्किम तयार गरिएको छ । यसले कम्पनीलाई न्यायोचित ढंगले सन्तुलनमा राखेर सम्पूर्ण शेयरधनीहरूलाई एकीकृत कमाण्डमा लैजान भरपुर मद्दत गर्दछ । सम्पूर्णको भविष्य सुनिश्चित गर्ने बाटो स्पष्ट गर्न सक्छ भन्ने बुझाइका साथ यो स्किम प्रस्तावना गरिएको छ ।
स्किमको नामः “शेयरधनी अग्राधिकार शेयर फण्ड SWPF” स्किमलाई देहायबेमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ ।
क. लगानीका अनुसार क्लब वाइज RBC १ करोडदेखि माथि १ करोड ५० लाखसम्म यो सुविधा लिन सकिन्छ । अधिकतम लगानीलाई अधिकतम हिसाब मानेर अन्यको निर्धारण गरिनेछ ।
ख. RBDC ६० लाखदेखि ८० लाखसम्म अधिकतम लगानीलाई अधिकतम हिसाब मानेर अन्यको निर्धारण गरिनेछ ।
ग. RMC ४० लाखदेखि ५० सम्म अधिकतम लगानीलाई अधिकतम हिसाब मानेर अन्यको निर्धारणगरिनेछ ।
घ. RMDC २५ लाखदेखि ३५ सम्म अधिकतम लगानीलाई अधिकतम हिसाब मानेर अन्यको निर्धारण गरिनेछ ।
ङ RSMC १० लाखसम्म अधिकतम लगानीलाई अधिकतम हिसाब मानेर अन्यको निर्धारण गरिनेछ ।
च. RLC जति शेयर त्यतिनै सुविधाको हिसाब गरेर निर्धारण गरिनेछ ।
छ. विशेषः कार्यकारी निर्देशकको हकमा शेयर जतिसुकै भए पनि न्यूनतम १ करोडसम्मको सुविधा रहनेछ ।
स्किम लागू गर्नका लागि टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट फण्डले कर्जा उपलब्ध गराउँदछ । जसको व्याजदर जम्मा ६.५% राखी सरदरमा किस्ता तालिकासमेत उपलब्ध गराउँदछ । कर्जा १० वर्षे रहनेछ ।
कर्जा रकम आरकेडी रियल स्टेटमा शेयर लगानी गरिनेछ । त्यो शेयर टुरिजममा धितो बन्धक रहनेछ ।
१०% डाउन पेमेन्ट भएपछि आरकेडीमार्फत् कवोल एकमुष्ठ रकमको नै वोनसको अग्राधिकार दर १०% कायम गरिनेछ ।
वार्षिक रूपमा १०% वोनस क्युमुलेटिभ हुँदै क्एँ मा जम्मा गरिनेछ । त्यो फण्ड टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट फण्डमा खडा गरिनेछ ।
वोनस १०% पाउने गरी अग्राधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । कम्पनिलाई कम नाफा भए पनि बढी नाफा भए पनि वोनस दर एकै हुनेछ ।
५ वर्षसम्म सबै वोनस क्एँ मा सञ्चित रहनेछ । ५ वर्ष पछाडि आएको वोनसको ५% नगद शेयरधनीले उपयोग गर्न सक्नेछन्। ५% क्एँ मा नै जम्मा हुनेछ ।
१० वर्षसम्म यो फण्डमा वोनस जम्मा भैरहनेछ । त्यो अवधीसम्म निजले फण्ड प्रयोग गर्न सक्ने छैनन्।
उल्लेखित सुविधा र सर्तहरूको अधीनमा रहेर कम्पनीका शेयरधनीलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित र भविष्यमुखी बनाउने ग्यारेन्टी कम्पनीले गरेको छ । यसले कम्पनीलाई गतिवान् बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कम्पनीको बुझाइ रहेको छ ।